Wararka Maanta: Isniin, Jun 25, 2012-Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya oo kasoo horjeestay Go'aankii Odayaasha Dhaqanka ee ahaa in la kordhiyo Kuraasta Baarlamaanka
Mudane C/weli Gaas ayaa sheegay in odayaasha dhaqanka ee ku shirsan Muqdisho aysan awood u lahayn inay bedelaan tirada xubnaha baarlamaanka, laakiinse ay soo jeedin karaan oo keliya fikirkooda hoggaamineed.
"Waa in la caddeeyo, odayaasha dhaqanka ee Muqdisho ku shirsan waxay soo xuli karaan oo keliya xildhibaannada, balse awood uma lahan inay tirada kordhiyaan. Waxayse xaq u leeyihiin inay fikirka soo jeediyaan," ayuu ra'iisul waasaaruhu yiri.
Hoggaamiyeyaasha dhaqanka oo kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa waxay go'aan ku gaareen in tirada xildhibaannada baarlamaanka lagu kordhiyo 50-xubnood lagana dhigo 275-xubnood, iyagana ay noqdaan gole sare.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa sheegay in baarlamaanka aan loo baahnayn in lagu kordhiyo tiro kale isagoo yiri. "Tirada kuraasta baarlamaanka looma baahna in la kordhiyo, sababtoo ah hoggaamiyeyaasha Soomaalida ayaa dhowr jeer oo ay shireen waxay go'aamiyeen in tirada laga dhigo 225-xubnood."
Baarlamaanka cusub ee soo socda ayaa waxaa lagu soo xulayaa nidaamka awood-qaybsiga DKMG ah ee 4.5-ka ah, wuxuuna bedeli doonaa baarlamaanka hadda jira oo ka kooban 550-xubnood.